बाइबलका कथाहरू: येशू राजाझैं आउनुहुन्छ - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
दुई जना अन्धा माग्नेहरूलाई निको पार्नुभएको केही समयपछि येशू यरूशलेमनजिकैको सानो गाउँनेर पुग्नुहुन्छ। उहाँले आफ्ना दुई जना चेलालाई यसो भन्नुहुन्छ: ‘गाउँमा जाओ र तिमीहरूले त्यहाँ एउटा गधाको बच्चा भेट्टाउनेछौ। त्यसलाई फुकाएर मकहाँ ल्याओ।’
गधाको बच्चा ल्याएपछि येशू त्यसमाथि बस्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यही गधा चढेर उहाँ यरूशलेम जानुहुन्छ। उहाँ सहरनजिक पुग्नुभएपछि मान्छेहरूको भीड उहाँलाई भेट्न आउँछ। उनीहरू आ-आफ्नो खास्टो सडकमा ओछ्याउँछन्। अरूले चाहिं खजुरका हाँगा काटेर बाटोमा बिछ्याउँछन्। त्यसपछि उनीहरू यसो भन्दै कराउँछन्: ‘यहोवाको नाउँमा आउनुहुने राजामाथि परमेश्वरको आशिष् होस्!’
धेरै वर्षअघि इस्राएलका नयाँ राजाहरू यसरी नै गधाको बच्चामाथि चढेर आउँथे। अहिले येशूले पनि त्यसै गर्दै हुनुहुन्छ। अनि इस्राएलीहरूले पनि येशू नै उनीहरूको राजा बनून् भन्ने आफ्नो इच्छा देखाइरहेका छन्। तर यो इच्छा सबैमा छैन। येशू मन्दिरमा पस्नुभएपछि भएको घटनाबाट हामी यो देख्न सक्छौं।
मन्दिरमा येशूले अन्धा अनि अपांगहरूलाई निको पार्नुहुन्छ। यो देखेर केटाकेटीहरू ठूलठूलो स्वरले येशूको जयजयकार गर्न थाल्छन्। तर पूजाहारीहरू रिसाउँछन्। उनीहरूले येशूलाई यसो भन्छन्: ‘के सुन्छौ, यिनीहरूले के भनिरहेका छन्?’
येशू भन्नुहुन्छ, ‘हो, म सुन्दैछु। तर के तिमीहरूले बाइबलमा “काखको बालकहरूका मुखबाट परमेश्वरले प्रशंसाको गीत गाउन लगाउनुभयो” भनेर लेखिएको पढेका छैनौ?’ केटाकेटीहरू परमेश्वरले छान्नुभएको राजा येशूको प्रशंसा गरिरहन्छन्।
हामी पनि ती केटाकेटीहरू जस्तै हुनुपर्छ। कसै-कसैले हामीलाई परमेश्वरको राज्यबारे कुरा गर्न नदेलान्। तर येशूले गर्नुभएका असल कुराहरूबारे हामी अरूलाई भनिरहनुपर्छ।
पृथ्वीमा हुनुहुँदा उहाँले राज्य गर्ने समय आएको थिएन। त्यसो भए उहाँले शासन गर्ने समय कहिले आउने छ? येशूका चेलाहरू पनि यो कुरा जान्न चाहन्छन्। अब यसपछि हामी त्यसबारे पढ्नेछौं।
मत्ती २१:१-१७; यूहन्ना १२:१२-१६.
यरूशलेमनजिकैको सानो गाउँमा पुग्नुभएपछि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई के गर्न अह्राउनुहुन्छ?
येशू यरूशलेम सहरनजिकै पुग्नुभएपछि के हुन्छ, चित्र हेरेर बताऊ।
येशूले अन्धा र लंगडालाई निको पार्नुभएको देखेर केटाकेटीहरू के गर्छन्?
रिसले चूर भएका धर्मगुरुहरूलाई येशूले के भन्नुहुन्छ?
हामी पनि येशूको प्रशंसा गर्ने केटाकेटीहरूजस्तै कसरी हुन सक्छौं?
चेलाहरू के जान्न चाहन्छन्?
मत्ती २१:१-१७ पढ्नुहोस्।
रोमीहरूको समयमा विजयी सेनापतिहरू यरूशलेमभित्र पस्नु र येशू राजाझैं यरूशलेममा प्रवेश गर्नुबीच के भिन्नता छ? (मत्ती २१:४, ५; जक. ९:९; फिलि. २:५-८; कल. २:१५)
येशू मन्दिरमा पस्नुहुँदा भजन ११८ अध्याय उद्धरण गर्ने इस्राएली केटाहरूबाट अहिलेका केटाकेटीहरूले के सिक्न सक्छन्? (मत्ती २१:९, १५; भज. ११८:२५, २६; २ तिमो. ३:१५; २ पत्रु. ३:१८)
यूहन्ना १२:१२-१६ पढ्नुहोस्।
खजुरका हाँगाहरू लिएर येशूलाई स्वागत गर्नुको अर्थ के हो? (यूह. १२:१३; फिलि. २:१०; प्रका. ७:९, १०)